आश्मा डिसी,भिजे - तीन प्रश्न - साप्ताहिक
पुस २६, २०७०
टिभी फिल्मी च्यानलका नियमित दर्शकका लागि आश्मा डिसी परिचित अनुहार हो। डिसी टिभी फिल्मीको स्थापना कालदेखि नै अर्थात् विगत तीन वर्षदेखि यो च्यानलमा आबद्ध भिडियो जक्की (भिजे) हुन्। करिब चार वर्षअघि गोपिकृष्ण रेडियो फिल्मीले आह्वान गरेको रेडियो जक्कीको प्रशिक्षणमा सहभागी भएपछि पुरानो बानेश्वर, काठमाडौंकी स्थायी बासिन्दा आश्मा सञ्चारकर्मी हुने बाटोमर लागेकी हुन्। आम सञ्चारमा पत्रकारिता तथा सामाजिक विज्ञानमा स्नातक अध्ययनरत आश्माले करिब दुई वर्ष रेडियो फिल्मीमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्। चलचित्रका गतिविधिहरू मात्र प्रसारण हुने उक्त एफएममा काम गरेको एक वर्ष नपुग्दै आश्माले टिभी फिल्मीमा समेत काम गर्ने अवसर पाइन्। रेडियो र टेलिभिजन दुबै विधामा करिब एक वर्ष काम गरेपछि विगत तीन वर्षयता उनी टेलिभिजनमा मात्र सक्रिय छिन्। यो अवधीमा आश्माले टिभी फिल्मीको पहिलो लाइभ कार्यक्रम 'जुम इन' सञ्चालन गरिन्। त्यसयता उनले द बलिउड शो, टिभी फिल्मी समाचार, लेट्स टक फिल्म जस्ता चलचित्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्। यतिबेला उनी प्रत्येक मंगलबार राति ७ः३० बजे प्रसारण हुने 'वन
डे विथ...' कार्यक्रममा प्रस्तुत भैरहेकी छिन्। उक्त कार्यक्रममा उनी हरेक साता एक जना सेलिब्रेटीको एक दिनको सम्पूर्ण गतिविधि प्रस्तुत गर्छिन्। यसक्रममा उनले ५० भन्दा बढि सेलिब्रेटीको दैनिकीलाई दर्शकमाझ पुर्‍याइसकेकी छिन्। यसबाहेक उनी प्रत्येक सोमबार, बुधबार तथा शुक्रबार ५ बजेदेखि ६ बजेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण हुने कार्यक्रम 'फिल्मी बज' मार्फत पनि दर्शकमाझ पुगिरहेकी छिन्। आइतबार दिउँसो वन डे विथ...कार्यक्रमको छायांकनस्थलमा व्यस्त आश्मासँग साप्ताहिकका कृष्ण भट्टराईको तीन प्रश्नः
चलचित्रसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा चलचित्रमै नायिका बन्ने प्रस्ताव आएको छैन ?
(हाँसो) त्यसरी नायिका नै बन्ने गम्भीर प्रस्ताव त कसैले पनि राख्नु भएको छैन तर नायिका बन्न प्रेरित गर्नेहरू भने धेरै हुनुहुन्छ। म भने सञ्चारकर्मीकै रुपमा सन्तुष्ट छु भनेर पन्छिन्छु।
वन डे विथ...कार्यक्रमको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुहुन्छ ?
चलचित्र क्षेत्रका सेलिब्रेटीहरूको एक दिनको गतिविधि समेट्ने यो पहिलो कार्यक्रम भएकाले पनि होला कतिपय दर्शक यही कार्यक्रमको प्रतिक्षामा रहेको समेत पाएको छु। दर्शकसहित सेलिब्रेटीहरूबाट समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेकी छु।
आगामी दिनमा कस्ता कार्यक्रममा देखिने संभावना छ ?
फेसनसंग सम्बन्धित एउटा कार्यक्रमसम्बन्धी गृहकार्य गर्दैछु। सेलिब्रेटी र फेसनलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिने उक्त कार्यक्रम नौलो हुने अपेक्षा गरेकी छु।
प्रकाशित :पुस २६, २०७०
आश्मा भइन् मिस टिन
कला सुब्बा, भिजे/आरजे/कोरियोग्राफर
सुनिल भट्ट, भिजे
सनी अब भिजे
रेखा पुरी, मोडल/भिजे